Toban Shaqsi Oo Caan Ah Oo Uu Ku Dhacay Cudurka Dillaaga Ah Ee HIV AIDS - iftineducation.com
Toban Shaqsi Oo Caan Ah Oo Uu Ku Dhacay Cudurka Dillaaga Ah Ee HIV AIDS
iftineducation.com – Cudurka AIDS ayaa ka mid ah cudurrada ugu halista badan ee dillaaga ah. 30kii sanno ee lasoo dhaafay cudurkaan waxaa u dhintay dad badan.
Qiimeyntii ugu dambeysay ee dunida laga soo saaray ayey dhakhaatiirtu ku caddeeyeen inuu HIV / AIDS sabab u noqday dhimashada 36 milyan oo shaqsi adduun oo dhan.
Asia ayaa ah qaaradda dadka ugu badan ay u geeriyoodeen cudurkaan. Halkaan hoose ayaana kusoo koobi doonaa liis ka kooban 10 shaqsi oo caan ah kuwaasoo u qurbaxay cudurkaan dillaaga ah ee loo yaqaano HIV / AIDS.
LIISKA TOBAN SHAQSI OO CAAN AH OO UU KU DHACAY CUDURKA HIV / AIDS:
Magic Johnson – Wuxuu ahaa xiddig ciyaari jiray kubadda kolayga oo ka fariistay ciyaaraha Mareykanka, waxaana ku dhacay cudurkaan dillaaga ah waana 57 sanno jir weli nool.
Arthur Ashe – Wuxuu ciyaari jiray Tenni sannadkii 1993dii ayuu qurbaxay waxaana loo eedeynayaa cudurkaan dillaaga ah.
Keith Haring – Sannadkii 1990kii ayuu qurbaxay waxaana uu ka mid yahay dadka caanka ah ee uu asiibay cudurkaani.
Eazy-E – 30 sanno jirkaan fannaanka ah ayaa waxaa uu ka mid yahay dadka caanka ah ee uu ku dhacay cudurkaan dillaaga ah ee loo yaqaano HIV / AIDS.
Timothy Patrick Murphy – 1988dii ayuu qurbaxay wuxuuna ka mid yahay dadka uu haleelay cudurkaan inta badan galmada la isku qabadsiiyo.
Brad Davis – 1991dii ayuu qurbaxay kuna darso wuxuu ahaa jillaa America ah oo si weyn loo jecel yahay, laakiin maalmihiisa waxaa yareeyey HIV / AIDS.
Rock Hudson – Jillaagii weynaa ee reer America ayaa wuxuu qurbaxay sannadkii 1985tii waxaana uu ka mid yahay dhibaneyaasha u geeriyooday cudurkaan.
Pedro Pablo Zamora – Wuxuu isku xilqaamay inuu dadka baro wax ku saabsan cudurkaan HIV / AIDS laakiin ugu dambeyntii sannadkii 1994tii ayuu u geeriyooday cudurkaan ninkaan oo asal ahaan kasoo jeeday Cuba.
Gia Carangi – Modelkii shidneyd intii u dhexeysay 1970 illaa 1980kii ayaa ugu dambeyn u geeriyootay HIV / AIDS sannadkii 1986dii sida laga soo xigtay saraakiil caafimaad oo USA ah.
Ricky Wilson – 38 sanno jirkaani waa fannaan u dhashay Mareykanka wuxuuna la dhibtoonayaa cudurka HIV / AIDS kaasoo ka mid ah cudurrada ugu halista badan adduunka waqti xaadirkaan.